I-95% i-alumina ceramic I-pin yokugaya insimbi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Spark Plug Insulator > Ignitor Insulator of Household Electrical Appliances > I-95% i-alumina ceramic I-pin yokugaya insimbi
Sisebenzisa umshini wokugcoba othomathikhi ukuqeda inqubo ye-glaze ukuze i-glazed ingasakazwa ngokulinganayo phezu komhlaba. Umzila wethu wokukhiqiza othomathikhi ungawenza kahle imikhiqizo kahle yonke into.
I-spark plug insulator yenziwe ngokujwayelekile ngama-95% alumina oxide ceramics. Kungaba ukumelana namandla amakhulu kuze kube ngu-18KV, imali ephezulu kanye nokushisa okuphezulu kufika ku-1600 ℃.
I-95% i-alumium oxide iphini yomhlahlandlela we-ceramic
Ukushiswa kweCeramic Electrode
Ukushiswa kwama-Electrodes Rods
Ukuzilahla kwe-Ceramic Needle